🥇 ▷ Samsung Galaxy FoldFrom South Korea Bilow wanaagsan! ✅
Samsung Galaxy FoldFrom South Korea Bilow wanaagsan!
Maalintii hore Samsung, taleefanka casriga ah ee la lali karo ee Galaxy FoldA ayaa shaaca ka qaaday in bisha Sebtember 6 ay dib u soo saari doonto oo lagu iibin doono Koonfurta Kuuriya. In kasta oo ay jiraan waxoogaa shaki ah oo ku saabsan qiimaha qiimaha taleefanka isku laabma, haddana aaladda waxay soo jiidatay dareen badan maalinta koowaad.
Waxaa laga iibiyay Maalinta Koowaad
Kuuriya KoreaSida warbixinta lagu sheegay, sida muuqata Galaxy laab Waxay noqotay mid caan ah isla markii ay diyaar noqotay Koonfurta Kuuriya. Sababtoo ah dhammaan taleefannada isku-laaban kara ee qaybta hore ayaa horayba loo iibiyay. Tirada saxda ah ee aaladda ku jirta dufcaddii ugu horreysay lama garanayo, laakiin sida ku xusan qiyaasta warshadaha, 1,000 aaladood ayay iibinayaan sedex qeybiyaasha waaweyn ee dalka.
Lacagtaas waxaa ku jira iibka internetka iyo SamsungKuma jiraan iibka dukaamadooda. Markaan iibinay Galaxy FoldIf waxaan eegaynaa isugaynta s, tiradaasi wey badantahay. Dhab ahaantii Galaxy S ama Galaxy Note Marka la barbar dhigo tirooyinka iibka ee taxanaha, tirada 1000 ee iibka ah waxay umuuqdaan kuwo aad u hooseeya. Laakiin maalinta ugu horreysa ee aaladda, oo ah tii ugu horreysay ee nooceeda ah, waa sawir iib ah oo cajiib ah.
Waxaa lagu iibiyay $ 1,980
Galaxy laab South Korea $ 1,980 (qiyaastii $ 11,300) qiimaha sumadda. Marka si aad u hesho taleefan gacmeedkan isku laabma, waa inaad bixisaa laba jeer intaad ku bixin lahayd taleefanka calanka caadiga ah.
Waxaan ubaahanahay inaan sugno oo aragno in yar ka hor inta aan su’aalaha laga jawaabin, sida ilaa xadka uu aaladda ka adkaan karto dhibaatooyinkii hore iyo sida ay ugu cimri dheer tahay. Si kastaba ha noqotee, ilaa maalinta ugu horreysa ee Galaxy FoldCan ayaa la sheegay inay sameeyeen bilow wanaagsan.